China Ultrasonic probe sterilizer fanamboarana PBD-S3 sy orinasa | Doneax
Sterilizer famotopotorana ultrasonic PBD-S3
Mila vidiny aho
Ny ultrasound probil sterilizer PBD-S3 dia vokatra famonoana otrikaretina ultrasonic izay mampiasa teknolojia vaovao. Ny PBD-S2 dia miavaka amin'ny teknolojia famonoana jiro mangatsiaka mba hamenoana ny famonoana otrikaretina ny fizahana ultrasound ao anatin'ny 30-60 segondra, izay mahomby, haingana ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Mamaha ny olan'ny famonoana otrikaretina izy io, mampihena ny loza mety hitrangan'ny aretina, ary manatratra ny famaritana teknika momba ny famonoana olona iray isaky ny mandeha. Ny famonoana otrikaretina miaraka amin'ny famotopotorana roa dia azo tratrarina amin'ny fotoana iray, mitahiry vola sy fotoana ary mahatsapa fanavaozana sy fanavaozana amin'ny famonoana otrikaretina ultrasound probes!
1. Fanondroana ny parameter:
1) Mampiasà haitao haavo UVLED avo lenta ary haavo maharitra ambany ny halavan'ny onjam-peo ultraviolet.
2) Ny fotoana fampiasan'ny UV LED dia ≥3 taona, ary ny isan-karazany UV dia 250 spec 280nm.
3) Angovo hazavana afovoany: ny herin'ny hazavana amin'ny 6cm dia ≥500uw / ​​cm2.
4) Famaritana ora fiasana: 30 sy 60 segondra.
5) Ny famonoana otrikaina avo lenta dia vita ao anatin'ny 60 segondra, ary ny tahan'ny fanamorana ny Bacillus subtilis dia -99,9%.
6) Tonga hatrany amin'ny famaritana antonony mandritra ny 30 segondra, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium chelonae, sns ≥99.9%.
7) Famonoana otrikaretina ara-batana, tsy misy fahasimbana amin'ny solomaso akustika sy ny fonenana famotopotorana, ary ny fikojakojana tsy tapaka ny fonenana famotopotorana miaraka amin'ny fonosana antibacterial.
8) Ny famolavolana boaty famonoana disinfection Double dia mety mamono otrikaina roa miaraka amin'ny fotoana iray, ny iray amin'izany dia famotopotorana intracavity.
9) Saron-tsolika feno automatique feno ary famonoana otrikaina feno.
10) Fampisehoana dizitaly amin'ny ora famonoana otrikaretina.
11) Ny slot famotopotorana dia manana fantsom-panazavana napetraka ao anaty toerana, izay mamantatra ho azy raha misy ny famotopotorana ary apetraka amin'ny toerany ny famotopotorana. Rehefa vita ny famonoana otrikaina dia tsy ilaina famonoana otrikaretina intsony.
12) Ny famolavolana olombelona, ​​famoahana maivana, dia tsy misy fiatraikany amin'ny fotoan'ny dokotera.
13) Mila toerana kely izy ary mora mihetsika.
14) Mety amin'ny kibo, taova kely, fo, fivaviana, refy, famotopotorana intraoperative.
15) Haben'ny mpampiantrano: 430X218X130MM, lanjan'ny fitaovana ≤25KG.
16) Fepetra fiasana
Temperature manodidina: (5 ～ 40) ℃, hamandoana: (30 ～ 75)%
Volan'ny herinaratra: ~ 220V, matetika ny famatsiana herinaratra: 50Hz
17) Fotoana fiantohana: 12 volana.
18) Serivisy 7X24 ora
Type Fitaovana sterilizing ultraviolet
Anaran'ny marika DONEAX
Laharana maodely PBD-S3
Fanasokajiana fitaovana Kilasy II
Serivisy aorian'ny fivarotana Fanohanana ara-teknika an-tserasera
Application Fitaovana fitsaboana hopitaly
Fotoana famonoana otrikaretina ≤ 60 segondra
Faritra UV LED Spectral 260-280nm
Tselatra LED UV 5.5-7.5V
UV LED ankehitriny ≤200ma
Angovo maivana ≥10mw
Module angovo LED UV ≥500μw / cm2 (7cm avy eo afovoany)
Haben'ny mpampiantrano L428mm * W218.8mm * H207.6mm
Sakan-tsoroka (faritra, haavony) habe 50mm * 50mm, hahavony 580-1000mm
Hery fampidirana AC 220V 50HZ
Hery naoty -90W 50Hz
1) Innovation: hazavana ultraviolet hatsiaka haavo matetika sy haavo lava-lava mitambatra miaraka amin'ny fomba famonoana ion ary miiba
2) Fast: Mila 30S, 60S fotsiny mba hamenoana desinfection sy sterilization amin'ny ambaratonga avo sy avo.
3) Safety: Famonoana otometera tanteraka tsy misy fitsabahan'ny tanana, azo antoka ary azo antoka.
4) Fiarovana ny tontolo iainana: Ny teknolojia famonoana jiro LED dia manana fiainana lava, fanjifana herinaratra ambany ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
5) tsaina: Ataovy moramora izy io, tsy manova ny fahazaran'ny dokotera, mamono otrikaretina mandeha ho azy sy mandeha ho azy.
6) Mute: fitokana-monina manokana sy ny fomba miasa tsy misy moana, tsy misy antony manelingelina ny tabataba.
Sterilizers ho an'ny ultrasound Probe
Ny atin'ny sterilizer dia mampiasa teknolojia fanamafisam-peo hazavana ultraviolet UV hazavana avo lenta sy ambany halavany miampy ny haitao hazavana ion, mampiasa ny mpihazona kapoaka probe, ny rafitra fananganana mandeha ho azy ary ny sensor induction amin'ny tehina fanohanan'ny masinina, 30 segondra, 60 segondra hamita ny famotopotorana ultrasound Medium sy famonoana otrikaina avo lenta ary fanalevahana, mahomby, haingana, ary sariaka amin'ny tontolo iainana, hamaha ny olan'ny famonoana otrikaretina, hampihena ny mety ho fihanaky ny famotopotorana ary hahatratra ny zavatra takian'ny olona iray, fampiasana iray, famonoana otrikaretina iray ny famaritana famonoana otrikaretina.
Mampiasà hazavana mangatsiaka ultraviolet 260nm-280nm amin'ny alàlan'ny ultraviolet LED, ny hazavana ultraviolet dia manimba haingana ny firafitry ny molekiola sy ny proteinina ao amin'ny ADN (asidra deoxyribonucleic) na RNA (asidra ribonucleic) ao amin'ny sela bitika, miteraka fahafatesan'ny sela Ary (na) fahafatesan'ny sela miverina amin'ny laoniny mba hahatratrarana sterilization. Ny hazavana ultraviolet mangatsiaka dia manana ny mampiavaka azy matetika sy ny halavan'ny halavany lava, izay afaka mitazona ny velaran'ilay zavatra voadio tsy misy fahasimbana mandritra ny famonoana haingana. Ny iôna miabo tsara sy miiba avy hatrany amin'ny angovo avo lenta dia mahatsapa fanesorana habakabaka telo habe, ary mety hamono ny banga sy ny zoro sasany.
1) 30S, 60S dia afaka mamita disinfection sy sterilization amin'ny ambaratonga avo sy avo lenta
2) Famonoana otrikaretina ara-batana, tsy misy fahasimbana amin'ny solomaso akustika sy ny trano ipetrahana.
3) Ny lozisialy manadihady dia azo soloina amin'ny fotoana rehetra araka ny endrik'ilay famotopotorana.
4) Fananganana mandeha ho azy, ny asa mangina rehetra, ny famonoana mikraoba rehetra.
5) Fampisehoana dizitaly amin'ny ora famonoana otrikaretina.
6) Ny sensor infrared dia natsangana tao anaty slot probe, izay afaka mamantatra ho azy raha misy probe na tsia.
7) Rehefa vita ny famonoana otrikaretina dia tsy averina intsony ilay famonoana otrikaretina.
8) Famolavolana mahaolona, ​​tsy manova ny fahazaran'ny dokotera mampiasa probe.
Lisitry ny fanitsiana
miaramila 1 napetraka
Base Sombiny 1
tsanganana Sombiny 1
Menaka fikarakarana Tavoahangy 1
M10 visy Sombiny 1
Boky torolàlana, taratasy fanamarinana, karatra fiantohana 1 kopia
Previous: Sterilizer famotopotorana ultrasonic PBD-S1
Manaraka: Trano fanatobiana entana sy fitaovana famonoana desinfection
Probe ultrasound amin'ny kibo
Probe momba ny ultrasound jantung
Fitaovana ultrasound tanana
Probe ultrasound tanana
Masinina ultrasound fitsaboana
Transducer fitarafana ara-pahasalamana
Fikarohana momba ny ultrasound
Ultrasound Arbe Probe
Probe Ultrasound azo entina
Probe momba ny ultrasound robotic
Fitsarana ultrasound kely indrindra
Fikarohana momba ny milina fitarafana
Ireo karazana milina fitarafana
Vidin'ny ultrasound Probe
Scanner an'ny ultrasound
Vidin'ny fandefasana ultrasound Wireless
Masinina mikoriana laminarin'ny rivotra finday AirH-Y2000H
Trano fanatobiana entana sy fitaovana famonoana desinfection
UV ambony fanamafisam-peo ambony Air Disinfector AirH -...
Robots mpamono krizy AI AIStrike